Ugbu a Edelweiss na -enye njikọta izu abụọ site na Zurich ruo Tanzania
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ugbu a Edelweiss na -enye njikọta izu abụọ site na Zurich ruo Tanzania
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị ọrụ gọọmentị kelere Edelweiss Zurich na Tanzania
dere Adam Ihucha - eTN Tanzania
Ụgbọ elu ezumike Switzerland, Edelweiss, ebugala ụgbọ elu njem njem mbụ ya na ọdụ ụgbọ elu Kilimanjaro International (KIA) kpọmkwem site na Zurich, na-enye ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ijeri kwuru ijeri dollar nke Tanzania.
Edelweiss rutere Airbus A340 na KIA na Ọktoba 9, 2021, na -achị ngalaba njem ụgbọ elu na Tanzania.
Ekele ekele ụgbọ elu ahụ na ikele mmiri na ọtụtụ ndị ọrụ Tanzania.
A na -ahụ nraranye Edelweiss dị ka ntuli aka ntụkwasị obi na Tanzania dị ka ebe nchekwa maka azụmahịa, ọkachasị njem nlegharị anya, maka usoro ahụike na nchekwa dị.
Edelweiss, ụlọ ọrụ nwanne nwanyị nke Switzerland International Air Lines na onye otu Lufthansa Group, nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị ahịa 20 n'ofe ụwa.
N'October 9, 2021, nwa agbọghọ Edelweiss Airbus A340 rutere na KIA, ọnụ ụzọ dị mkpa maka njem nlegharị anya ugwu nke Tanzania, yana ndị njem 270 si n'ofe Europe niile, nke na -eme ọmarịcha oge njem.
Ekele ekele ụgbọ elu ahụ mgbe ọ metụchara ụzọ ụgbọ elu JRO na 8:04 am East African Time, dị ka ndị minista na -ahụ maka ọrụ na -ahụ maka ọrụ na ụgbọ njem yana ndị sitere na akụ na ụba na njem, Prof. Makame Mbarawa na Dr. Damas. Ndumbaro, n'otu n'otu, ya na onye nnọchite anya obodo UNDP Tanzania, Oriakụ Christine Musisi; Onye nnochite anya Switzerland, Dr. Didier Chassot; na Lufthansa Group General Manager Southern na Eastern Africa, Dọkịnta Andrea Shulz duuru igwe mmadụ ahụ wee nwee ọerụ na ọdịda ụgbọ elu ahụ mere eme.
“Nraranye nke Edelweiss bụ ntuli aka ntụkwasị obi na Tanzania dị ka ebe nchekwa maka azụmahịa, ọkachasị njem nlegharị anya, ekele maka usoro ahụike na nchekwa dị iji hụ na njem ụgbọ elu ga -adịkwa mma ma ghara ịgbasa Coronaviruses n'ụwa niile,” Prof. Mbarawa kwuru n'etiti a cheụrị sitere n'ala.
Ọ gbakwụnyere, sị: "Edelweiss na -enye njikọ dị mkpa na sekit njem nlegharị anya nke ugwu Tanzania nke nwere ebe na -eto ngwa ngwa na Europe na ụlọ ọrụ ụgbọ elu taa na obodo ndị ọzọ mepere emepe n'ofe ụwa, na -eku ume ndụ ọhụrụ maka njem nlegharị anya anyị, ụlọ ọrụ akụ na ụba dị mkpa."
Onye na -ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya, Dr. Damas Ndumbaro, kwuru na Edelweiss na -enye njikọ abụọ kwa izu site na Zurich, Switzerland, na Tanzania abụghị naanị mgbanye aka maka njem nlegharị anya na -arịa ọrịa kamakwa akara doro anya nke inwe ntụkwasị obi na -eto eto maka ụlọ ọrụ njem na usoro COVID-2 nke obodo.
Edelweiss ga -efepụ site na Zurich ruo Kilimanjaro wee ga Zanzibar kwa ụbọchị Tuesday na Fraịde site ugbu a ruo na ngwụcha Machị. A ga -eji ụgbọ elu Airbus A340 rụọ ọrụ. Ụgbọ elu ahụ na -enye ngụkọta oche 314 - 27 na Klas azụmaahịa, 76 na Economy Max, yana 211 na Economy.
Bernd Bauer, onye isi ụlọ ọrụ Edelweiss kwuru, sị: “Dị ka onye isi ụgbọ elu ezumike ezumike nke Switzerland, Edelweiss na -efega ebe kacha mma n'ụwa niile. Anyị na Kilimanjaro na Zanzibar, anyị nwere ebe ezumike ọhụrụ 2 a na -enye, nke na -akwado oke anyị na mpaghara Afrịka ma na -enyere ndị ọbịa anyị si Switzerland na Europe aka ịnụ ụtọ ahụmịhe njem agaghị echefu echefu. ”
Didier Chassot, onye nnọchi anya Switzerland na Tanzania, nwere obi ụtọ mgbe ụgbọ elu nke mbụ rutere: “Obi dị anyị ụtọ na ụgbọ elu Switzerland na -ejikọ Switzerland na Tanzania ozugbo. Mkpebi a Edelweiss gosiri etu Tanzania mara mma nke ukwuu - ala mmiri na Zanzibar - fọdụụrụ ndị Switzerland. Ọ na-egosipụtakwa ntụkwasị obi na-eto eto na mbọ ndị Tanzania na-eme iji dozie nsogbu COVID-19 nwere mkpebi siri ike na nghọta doro anya, nke anyị nabatara nke ọma. ”
Ụgbọ elu Edelweiss na -aga KIA nwere, n'etiti ihe ndị ọzọ, enwere ike site na njikọta atọ n'ime otu United Nations Development Programs (UNDP), Tanzania Association of Tour Operators (TATO), na gọọmentị site na Ministry of Natural Resources and Tourism.
“Enwere m ekele nke ukwuu ịhụ ụfọdụ mkpụrụ nke mmekorita anyị na Ministry of Natural Resources na Tourism na TATO n'ịkwalite mgbake ndị njem na Tanzania. Ekele dịrị gọọmentị Tanzania, TATO, na ndị otu na -ahụ maka njikwa Swissair maka ịrụsi ọrụ ike niile nke dugara anyị ruo taa, ”onye nnọchite anya mba UNDP, nwaada Christine Musisi gwara ndị na -ege ntị na mmemme nnabata ụgbọ elu.
Nwada Musisi kwuru na ya chetara oke mkpọchi mkpọchi ụwa na Eprel 2020 mgbe UNDP duziri UN nyocha ngwa ngwa mmetụta mmekọrịta akụ na ụba nke COVID-19 na Tanzania, o doro anya site n'ọmụmụ ihe a na njem nlegharị anya bụ ụlọ ọrụ akụ na ụba kacha sie ike na. obodo.
Site na mbelata njem njem 81 %, ọtụtụ azụmaahịa dara wee bute nnukwu mfu ego, mfu nke ụzọ atọ n'ụzọ anọ na ụlọ ọrụ, bụrụ ndị na-eme njem nlegharị anya, ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, njem nlegharị anya, ndị na-ebuga ya, ndị na-ebubata nri na ndị ahịa.
Nke a metụrụ ndụ ọtụtụ ndị aka, ọkachasị ụlọ ọrụ obere, obere na ọkara, ndị ọrụ na -echekwabeghị, na azụmaahịa na -abụghị nke ọtụtụ ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị.
Ọ kọwara, "Anyị na-ekele ndị Ministry of Natural Resources na Tourism maka ịtụkwasị UNDP obi dị ka onye mmekọ na-akwadebe atụmatụ mgbake na nkwado nkwado COVID-19 maka ụlọ ọrụ njem."
Nwada Musisi gbakwụnyere ngwa ngwa: “Anyị na-ekelekwa TATO maka idu ndú ha na njikọ aka nke nwere ọtụtụ ndị nke butere ọrụ mgbake njem njem anyị na-emejuputa na nke nyere aka na imepe ụzọ a na usoro dị iche iche, na-arụ ọrụ maka ịmalitegharị ahịa. na Europe, [America], na Middle East. ”
Musisi kwubiri, "Ekwere m na nke a bụ mmalite njem anyị n'iwulite ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ka mma, nke na -agbakwunyere, na -enwe obi ike, na -enwekwa ọganihu."
Site na iwebata ụgbọ elu Edelweiss ugboro abụọ kwa izu, onye isi UNDP kwuru na ọ mara mma na Tanzania agaghị agbake kamakwa ọ ga-abawanye, oke ahịa ahịa njem na Europe na Northern America.
Onye isi ụlọ ọrụ TATO, Maazị Sirili Akko, kwupụtara ekele dị ukwuu maka Edelweiss na UNDP, na-ekwu na nkwado ha bịara n'oge kacha gbaa ọchịchịrị na akụkọ ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na nso nso a nke mmetụta oria ojoo COVID-19 kpatara.
Onye njem nleta, Maazị Amer Vohora kwuru, sị: “Edelweiss n'ikpeazụ ịlaghachi Tanzania bụ ogologo oge na -abịa, ụgbọ elu ụgbọ elu mara mma nke dabara adaba ma dịkwa mma nke ukwuu na ọrụ zuru oke, n'ihi na ọ ga -adị m mkpa ịlaghachi azụ ugboro ugboro ịga leta kọfị Edelweiss. Ala na ụlọ. Aga m edobe ụgbọ elu nloghachi m ozugbo m lọtara. ”